Ulutsha olukhulayo kunye ne-cryptocurrency luza kukhawuleza inkqubo yokukhula! Abantwana bam bathanda i-PIVX! | PIVX
Ulutsha olukhulayo kunye ne-cryptocurrency luza kukhawuleza inkqubo yokukhula! Abantwana bam bathanda i-PIVX!
Kwabaninzi abaninzi abantu abakwi-cryptocurrency yinto abangenakuyibopha intloko. Abaziqondi izizathu zezixabiso kunye nento ongayenza ngazo.(I-cryptocurrency). Kwaba bantu yinto ebhaliweyo ngokungaphumeleli ekufuneka iqhube ngokukhawuleza kungekudala. Abayiqondi indlela i-cryptocurrency kunye ne-technology ye-block ye-blockchain isele ishintshe ihlabathi kwaye iya kuqhubeka ikwenza ngokukhawuleza.
Abo bantu ayingabo ekumele ukuba siyabaleqa (singaba kholi be-Cryptocurrency… Yilo lutsha esifanele silujolise kwaye silufundise ukunceda ,ngeCryptoCurrency, ukukhawuleza inkqubo yokukhula. Ngabo baza kuphuma kwibhodi kwaye basebenzise i-crypto ngendlela ejoliswe ngayo ukuyisebenzisa.
Abantwana bethu abangama-8 no-5 ngeminyaka baye bandive ndithetha ezininzi ngezininzi nge-cryptocurrency kunye ne-blockchain technology kwezi zimbalwa iinyanga ezidlulileyo. Kwabantwana bam icryptocurrency yinto eqhelekileyo, banako ukugcina imali kwi crypto, bayabuza malunga nexabiso layo rhoqo kwaye batsha zintambo de ifike lomini banokwazi ukuyisebenzisa iCrypto.
Abantwa bam baye bandiva ndithetha malunga ne @pivx kakhulu ngokukhethekileyo kwaye baye babona isoftware ngokuphindaphindiweyo. Ndiyabulela kwilungu lePIVX, ngenxa yakhe abantwana sebenayo kwe eyabo imali yePIVX abayibambileyo (ndikhahlele uRhubarbarian). Namhlanje unyana wam wamangalisa into endiyifumanekisayo engumangaliso kakhulu. Ngokwenene wabhala into (kunye noncedo lukadadewabo omdala) malunga nePIVX kunye neeleta zentambo abaye badlala ngazo behlamba! Khangela ngolu hlobo:
Iguqulela “uSaúl uyayithanda iPIVX”.
Kukho isizukulwana esitsha esakhula apho i-Cryptocurrency iya kuba yinto ehamba ngayo kwinkqubo yemali. Ndiyathemba ukuba ihlabathi likulungele!